Global Voices teny Malagasy » The Public Voice: Fanamby manerantany ny zon’ny fiainana manokana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Avrily 2019 4:17 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Fanarahamaso, Fiainana Manokana, Lahavolana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Solovava, GV Mpisolovava
Andro manan-danja ho an'ny fiarahamonim-pirenena manerantany miaro ny tsiambaratelon'ny fiainana manokana sy ny fahalalaham-pitenenana ny 22 Oktobra 2012 . Nampiantrano fihaonambe iraisam-pirenena tao Punta del Este, Orogoay, ny fiaraha-mientan'ny The Public Voice  (Feon'ny Vahoaka) ary nisy ny fanasana tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny resadresaka sy ny fifaneraserana tamin'ireo mpanentana.
Azonao atao ny mamaky ilay fandaharana sy manaraka ny fitantarana mivantana tao amin'ny Webcast amin'ny teny Anglisy  sy Espaniola  .
Nandritra io andro io, namakafaka ny kolontsaina sy ny fomba fijery momba ny tsiambaratelon'ny fiainana manokana manerantany ireo mpanentana. Nisarika ny sain'ny daholobe momba ny teknolojian'ny fanaraha-maso sy ny fiantraikan'izany ho an'ny mpanjifa, ho an'ny fahalalaham-pitenenana sy ny zon'olombelona ​​izy ireo ary nanadihady ny politikan'i Amerikana Latina sy ny lalàna ary ny fomba fijery mikasika ny teknolojia. Ity no varavarankely bitika hananan'ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny Fihaonambe Iraisam-pirenena faha-34 momba ny Fiarovana ny Angondrakitra sy ny Vaomiera Mpiaro ny Tsiambaratelon'ny Fiainana Manokana  izay nahitana ny sampandraharaham-panjakana rehetra manerana izao tontolo izao. Azonao jerena eto  ny fitantarana an-tserasera. Azo antoka fa nitondra ny lohahevitra manan-danja ho an'ny olom-pirenena niaraka tamin'ny resadresaka ambony latabatra izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/13/137061/
 Fihaonambe Iraisam-pirenena faha-34 momba ny Fiarovana ny Angondrakitra sy ny Vaomiera Mpiaro ny Tsiambaratelon'ny Fiainana Manokana: http://privacyconference2012.org/english/